वडा नं १० मा आशा... :: सुजिता कार्की :: Setopati
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन मतपरिणाममा धेरैको चासो छ।
विवेकशील साझाले प्रत्यक्षतर्फ जित्ने भनेर आशा गरेका एक मात्र उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्र लगातारपछि परेका छन्। कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले ६ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएर क्षेत्र नंम्बर १ मा अग्रता लिइरहेका छन्। मिश्रले भने ५ हजार ७ सय ८० मत प्राप्त गरेका छन्।
उनी ९ सय ५ मतले पछाडि छन्। के रविन्द्र मिश्रले बाँकी रहेका मत गन्दा प्रकाशमान सिंहलाई उछिन्न अझै सम्भव छ? सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै रविन्द्र मिश्रले आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको भोट नआएको बताए।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले वडा नं १० र २९ मा आशा गरेभन्दा केही कम मत आएको बताए। 'वडा नं १० मा सोचेभन्दा केही मत कम आयो', मिश्रले भने उनलाई अझै वडा नं ३१ को मतले 'मेकअप' गर्ने आशा छ।
वडा नं ३१ मा १२ हजार मतदाता छन्। यो वडामा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने वाम गठबन्धन बलियो छ। 'त्यहाँ वाम गठबन्धन बलियो र कांग्रेस कमजोर छ', मिश्रले भने, 'यो ठाउँबाट हामीलाई मत आउने आशा छ।' स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं ३१ मा एमालेले ४ हजार २ सय ९७ मत ल्याएको थियो।
कांग्रेसले ३ हजार ४ सय १६ र माओवादीले १ हजार ६२ मत ल्याएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा छुट्टा छ्ट्टै लडेका विवेकशील र साझाका मेयरका उम्मेद्वारले वडा नं ३१ बाट पाएको मत जोड्ने हो भने ३ हजार १ सय ५२ हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको मत विगतमा 'स्वीङ' भएको देखिन्छ। त्यसैले वडा नं ३१ मा मिश्रको अपेक्षा जायज देखिन्छ। तर सिंहले भने वडा नं ३१ मा पनि आफ्नो पकड रहेको दावी गरे।
उनले आफूले अग्रता कायम गरेकाले अब पछाडि पर्नु नपर्ने बताए। तर वडा नं १० मा कम मत आएको सिंहको विश्लेषण छ। वडा नं ३१ को वाम गठबन्धनको मत मिश्रको पक्षमा जान्छ कि जाँदैन? भन्ने विषयले जितको निर्धारण गर्नेछ। विवेकशल साझाका केही नेताहरुले भने अन्तिम समयमा रविन्द्र मिश्र विरुद्ध एमालेका केही नेताहरु सक्रिय भएर विरोधमा लागेकाले समस्या हुनसक्ने आकलन गरेका छन्। मिश्र संसदमा पुग्दा पटक पटक समस्या खेप्न पर्ने भन्दै एमालेले अन्तिम समयमा मिश्रलाई भोट नहाल्न सुझाएको विवेकशीलका नेताहरूको तर्क छ।
एमालेले काठमाडौँ १ मा कांग्रेसलाई सघाएर क्षेत्र नं २ मा माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेसको समर्थन जुटाएको विवेकिशलको तर्क छ।
मिश्रलाई अब जिततर्फ अगाडि बढ्ने पहिला सिंहलाई ९ सय मत तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिंहलाई थपिने मतभन्दा धेरै मत आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै उम्मेद्वारले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा मतगणना नियालिरहेको बताए। दुवैको आशा वडा नं ३१ मै टिकेको छ। चार वटा मात्र वडा रहेको यो क्षेत्रका वडा नं १०, ११ र २९ को मतगणना भैसकेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४, ११:१८:२७